#မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကို ဘာကြောင့် တတိယ နေ့မှာ ပွားများ ခိုင်းရ ပါသနည်း❓ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
#မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကို ဘာကြောင့် တတိယ နေ့မှာ ပွားများ ခိုင်းရ ပါသနည်း❓
ကမ္မဌာန်း ၄၀ ထဲမှာ စရိုက် မျိုးစုံ နဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့ ကမ္မဌာန်း ဟာ မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း (သေ ခြင်း တရား ပွားများခြင်း ကမ္မဌာန်း) ပါ..လို့.. ဟောခဲ့တာပါ… #မရဏာနုဿတိကမ္မဌာန်း ကို ပွား များစေရခြင်းရည်ရွယ်ချက်သည်သမာဓိကိုမြန်မြန်တက်စေချင်လို့ပါ..ဒေါသဖြစ်စရာအာရုံတခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ လိုက်တဲ့ အခါ…#ငါသည်မုချသေရမှာ…အချိန်က ကပ်နေပြီ.. #ငါသေရဦးမှာပါလား.. #ငါရဲ့သေခြင်းကပဲမြဲတယ်…#သေဖို့သေချာနေတာပါလား….#တလောကလုံးမှာရှိနေကြတဲ့#သတ္တဝါ တွေအားလုံး နေ့စဥ်နဲ့အမျှ တဖွဲဖွဲသေနေကြသလိုငါလည်းပဲသေရဦးမှာပါလား..ဆိုပြီး ဒလို ပွားကြည့် လိုက်ပါလား…ဒေါသနဲ့ တွေးနေ တာတွေ အာရုံ ဖော်ပြီး တွေးနေ တာတွေဟာ… အရှိန် တွေ အကုန် လျော့ကုန် တာပေါ့…ငါ မသေသေးဘူး.. ငါ မနက်ဖြန် အသက်ရှင်ဦးမယ်လို့ ထင်နေ သေးလို့..အဲ့ဒီ… ငါကို သေအောင် မသတ်နိုင်ပဲ တရား ထိုင်နေ တော့…. တနေ့ တချိန် ထိုင်တယ်.. တနေ ကုန် ထိုင်ပါ တယ်…၁၀နါရီ ထိုင်ပါ တယ်…ဆိုတော့ ကာ…ထိုင်တာသာ ရှိနေ ပြီး.ငါ… ထိုင် တယ် ထင်ထားတော့….တရား နဲ့ ငါ နဲ့ ရောထွေးပြီး လုံးချာ လည်နေ တော့တာပေါ့….ဒါမို့.. ကိုယ် စောင့် ကမ္မဌာန်း (၄) မျိုး ထဲ မှာ ယခု မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကို နာနာ ပွားများ ဖို့ သင်ခန်းစာ မှာ ထည့်ပေးထါးရတာပါ ဒီ၄ပါးထဲက သမာဓိအမြန်ဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ ကမ္မဌာန်းက မရဏာနုဿတိ ကမ္မဌာန်း ပါ..ဒါမို့… သိပ်ကို စည်းစနစ် ကျနလွန်းစွာ စီစဥ် ပေးထါးတဲ့ ကမ္မဌာန်း ရှုပွား နည်း တွေ ကို တခုမှ အဆင့်ကျော်လို့ ဖြုတ်လို့ မရပါဘူး…။
လိုအပ်လို့ကို ထည့်ပေးထါးရတာပါ…ဘာမှသိစရာမလို ဆရာတော်ဘုရားကြီးများခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဆရာသမားအပေါ် ယုံကြည်တဲ့ စိတ်၊ ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို ရိုရိုသေသေ နဲ့ သာ အားထုတ် သွားရင် ဘယ်မှာ မရောက် နိုင်စရာ ရှိပါ တော့မည်နည်း..သေခြင်း တရားကို သာ ဆင်ခြင် ကြည့် လိုက်ပါ…ချက်ချင်း ငေါက်ခနဲ အစစ အရာရာ အားလုံး သံဝေဂ ဉါဏ်တွေ ဖြစ်ပွား လာပါ တယ်.. မသေသေးဘူး ထင်ထားလို့ ကို လောဘ တွေ ကြီး ဒေါသတွေဖြစ် မာနတွေ ထောင်နေကြ တာပါ …ဒီကိလေသာတွေ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး ငြိမ်ဝပ်ပိပြားသွားစေမယ့်…ကမ္မဌာန်း တခုဖြစ်တဲ့ သေ ခြင်း တရား ပွားများ ခြင်း ကမ္မဌာန်း ကို မိမိ ရရလေး ပွားကြည့် ပါ… အကုန် ပွဲသိမ်း သွား ပါလိမ့် မယ်… အဲ့ဒီ သေခြင်း တရားကို မပွားလို့… ငါ..က မသေသေး ဘူးထင်နေတော့… ရှေ့ဆက်စရာ တွေကို တွေး ကြော တွေရှည် နေတာပေါ့..ခုနေသေရင် အကုန် တန်းလန်း ထားခဲ့ ရမှာ…လို့ နှလုံး သွင်း ကြည့်လိုက် ပါလား…ဟုတ်တယ် တကယ် နှလုံး သွင်းကြည့် ပါ…သမာဓိ တွေ တက် တာမှ မြန်မှ မြန်…ငါ…. မ သေလို့… ကို… ဒုက္ခ တွေ က များနေ တာ..ဒီ… ငါ..မ သေပါဘူး.. ငါ မသေနိုင် သေးဘူး လို့ ဆိုပြီး ဆွဲ ယူမှတ် နေတော့..တရားအားထုတ်ဖို့ကိုလည်း အားမှ အားထုတ်တာပေါ့.. နေ့ရွေ ညရွေ့.. ရွေ့ရွေ့ နေကြတာဟာ…ခုလို သေခြင်းတရား ကို ခဏ ခဏ မပွားများမိလို့ပါ..။
ဒါ မို့ ဒီ ကမ္မဌာန်း ကို အမြဲ ပွားများ ဖြစ်အောင် လို့ တရား မထိုင် ခင် အရှေ့ ပိုင်း ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ် လောက်မှာ အမြဲ ပွားများ ရတာပါ..ပွားများတာ ကြာလာ ထုံလာတော့ စိတ်မှာ..အော်… ငါ သေရ ဦးမှာပါလား…ဆိုတဲ့ သံဝေဂ အတွေးက ရောက်ရောက်နေပြီမို့.. အချိန် မဆွဲ တော့ဘူး.. ပြိုင်ဆိုင် ချင် မှု တွေ မရှိ တော့ဘူး မာန်မာန ထောင် လွှားမှု တွေ မရှိ တော့ဘူး..ဒီ စိတ်တွေ ရှိနေ သေး လို့ မငြိမ်းချမ်း နိုင်သေးတာပါ…ဟော… ခုလို…မရဏာနုဿတိ လေးလည်း ခဏ ခဏ ပွားလိုက်ရော ..ကဲ… ဒင်း.. ဘယ်ခံ နိုင်မလဲ…ထောင်ချင် တဲ့မာန ပြိုင်ချင် တဲ့မာန တွေ အားလုံး ခဝါချကုန်ရတာ ပေါ့… ဒါတင် မဟုတ်သေး..တရား အားထုတ် နေတဲ့ အချိန် ဘုရား ဖူးခန်းလေး ရောက်လာ လို့ မိမိက ဘုရားတွေ ဖူးရလို့ ကြွားချင်တဲ့ စိတ်ကလေး အလင်းတွေ ရလို့ ကြွားချင်တဲ့စိတ် ကလေး. .အို… ဘာဖြစ်လာလို့ ညာဖြစ်လာလို့ ဆိုပြီး ကြွားချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့လျှင် လည်း…မရဏာ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကိုသာ ပွားလိုက် ဖို့ အဆင်သင့် အနေ နဲ့ ပြင်ဆင် ပေးထါး ရ တာပါ.တကယ်တော့ ဘာမှ မသိ ဘာမှ နားမလည် ပဲ ဆရာသမား ခိုင်းတဲ့အတိုင်း တသွေမ တိမ်း လိုက်နာ ကျင့်ကြံ အားထုတ် သွားကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့်…လိုရာခရီး… လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ရောက် နိုင်ပါတယ် ရှင့်…။
ဘာကြောင့် ယခုလို ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း ၄ ပါးကို တရား ထိုင်တိုင်း ထိုင်တိုင်း ပွားများခိုင်း ရပါ သနည်း ဆိုသည်မှာ..#အလတ်စား ကိလေသာတွေ ကို သမာဓိနဲ့ သတ်ရတယ်… ဆိုတဲ့..ရည်ရွယ် ချက်ကို ပြည့်ဝစေဖို့ ပါ..မည်သို့သော ကိလေသာ တွေ ပေါ်လာလာ.. ဤ ကမ္မဌာန်းတခုခု ကိုသာ ပွားလိုက်ပါ..သမာဓိ ပြန်တက် လာစေပါတယ်..အနုစားကိလေသာတွေကိုတော့ ဝိပဿနာဉာဏ် ပညာနဲ့ သတ်ရ တာပေါ့..ဒါမို့… အင်မတန်မှကို ကောင်းလွန်းသော ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် တရား ရှုပွားနည်းစနစ်တခုကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အားထုတ် ဖြစ်သွားအောင် ရှေးဆရာတော် ဘုရားကြီး များက လက်ဆင့်ကမ်း ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော…ဘုရားဖူး သင်ခန်းစာ ထည့်ပေးထါးခြင်းကြောင့် လည်း..ဘုရားဖူး ချင်သော စိတ်များကြောင့် တရား အားထုတ် ဖြစ်သွား ရာက နေပဲ…နောက်ပိုင်း သူ့အလိုလို တရားက ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ ပါတယ်ထို့ကြောင့် #မရဏာနုဿတိ ကိုဘာကြောင့် တတိယ နေ့ မှာ ပွားများ ခိုင်းရပါ သနည်း ဆို လျှင် ဖြင့်..ဤ သို့ သော အ ကြောင်း များ ကြောင့် ပါ လို့.. ရေးသား ပူဇော် လိုက်ရ ပါတော့ သည်…ဤ စာနှင့် အတူ တရား ဓမ္မများကို ဟောပြော ပြသသင် ကြား ပေး တော် မူ လျှက် ရှိကြ ကုန်သော #ဆရာတော် ဘုရားကြီး နှင့်#ဆရာတော် ဘုရားလေး တို့အား ဦးခိုက် ပူဇော် လိုက်ရ ပါသည်။ ယောဂီ အားလုံး တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့ ကြပါ စေရှင်
#မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကို ဘာကြောင့် ဒုတိယ နေ့မှာ ပွားခိုင်း ရပါ သနည်း❓